Izimoto ezisetshenzisiwe, Abadayisi bezimoto ezisetshenzisiwe, Izimoto ezisetshenzisiwe ezithengiswayo - Hankoubei
SIYAKWAMUKELA IPANDA IMOTO ESEBENZISA
IPanda isebenzisa imoto eqhutshwa uHankoubei, Igama eliphelele elithi Hankoubei Import and Expert Service Co., ltd, iyinkampani ephethwe ngokuphelele yeZall Smart commerce Group (02098.HK), engenye yamabhizinisi aphezulu ayi-100 eChina nenkampani efakwe kuhlu ibhodi enkulu yeHongKong. Le nkampani yasungulwa ngonyaka we-2015 ngenhloko-dolobha ebhalisiwe engu-50 million RMB.
Singabanye bamabhizinisi okuthekelisa izimoto asetshenzisiwe eChina, futhi futhi yilo elikhulu kunawo wonke esifundazweni saseHubei. Isekelwe eWuhan, izibophezela ekwakheni ipulatifomu yesevisi yokuthumela izinto ngaphandle kwezimoto ukuze isetshenziselwe ukusebenzela amazwe "eBelt and Road", azinikele ekubeni ngumthumeli wezimoto omkhulu kunabo bonke osetshenzisiwe eChina.
UFukuda Aoling MRT
Ibhasi iDongfeng Chaolong EQ6700LT
Ngokuya ngeqembu labaphathi lokuqala, nikeza amaklayenti ethu insizakalo yobungcweti ngesisombululo esisodwa, esonga imali nesenziwe ngezifiso zebhizinisi lemoto elisebenzisayo elithumela kwamanye amazwe.
Ukungeniswa Komthetho Wokuphenya
Kunconywa Imoto Esetshenzisiwe
Ukuhlola Ikhwalithi Yemoto Esetshenzisiwe
Samukela ngokufudumele amakhasimende avela ekhaya nakwamanye amazwe ukuvakashela inkampani yethu, nokubambisana nathi ngekusasa elihle ndawonye.
Siyathembisa ukuthi sinekhono lokuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi enengqondo yamakhasimende.
emisha, ukuvumelana, ukusebenzisana kanye nokwabelana, imikhondo, inqubekela phambili ebambekayo.
Imikhiqizo yethu ithengisa kahle ezimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Singabanye bamabhizinisi okuthekelisa izimoto asetshenzisiwe eChina, futhi futhi yilo elikhulu kunawo wonke esifundazweni saseHubei.